လဲလှယ်ရေးအခမဲ့ - အကောင့်များကမ်းလှမ်းခဲ့သည်အကောင်းဆုံးအစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများ
ရှရီယာဥပဒေ (လူသားများအတွက်ဘုရားသခင့်အလိုတော်၊ ကုရ်အာန်အရ) တွင်နှစ်ပေါင်းများစွာကုန်သွယ်မှု Forex သည် Haram လား၊
အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်လူအများစုကလောင်းကစား (Al-Maisir)၊ အရက် (Khamr) နှင့် ၀ က်သား (၀ က်) သည် Haram (ထို့ကြောင့်တားမြစ်ထားသည်) ဖြစ်ကြောင်းကိုရူအာအရသိရသည် - သို့သော်ကုန်သွယ်ရေး Forex သည်မဖြစ်သင့်ကြောင်းသင်သိပါသလား။
ယနေ့ခေတ်တွင်ပညာရှင်များစွာသည်အမြင်နှင့်မတူကြပါ။ ခေတ်သစ်ဘဝနှင့်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်ချက်အတွက်ဘာကိုဆိုလိုသည်ကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းတွင်အစ္စလာမ့်ဥပဒေကိုအပြည့်အ ၀ လေးစားလိုက်နာခြင်းရှိသော်လည်း၎င်းသည်အချို့အပိုင်းများကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်အစ္စလာမ်သာသနာ၏နောက်လိုက်တစ် ဦး ဖြစ်ပြီး Forex ကိုအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်လိုပါကဟလာလ်ကုန်သွယ်မှုအကောင့်ကိုဖွင့်လှစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင် ၀ မ်းသာပါလိမ့်မည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင်အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများ၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီသောပလက်ဖောင်းတစ်ခုနှင့်မည်သည့်ပံ့ပိုးပေးသူများကိုရွေးချယ်သည့်အခါထွက်ပေါ်လာသောအဓိက metric များကိုရှင်းပြပါမည်။ we ၂၀၂၀ မှာစဉ်းစားသင့်တယ်
အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားအကောင့်ဆိုတာဘာလဲ။
အတိုချုပ်ပြောရရင်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုနောက်လိုက်တွေကိုငွေကြေးရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ပေးဖို့အစ္စလာမ်စ် Forex ပွဲစားစာရင်းရှိတယ်။ သူတို့ရဲ့ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေသေးတယ်။
တခါတရံ 'halal forex account' သို့မဟုတ် 'swap-free account' ဟုခေါ်သည် - ထိုအကောင့်များသည်ခဏတာဖြစ်ပျက်နေပြီ။ ပွဲစားကုမ္ပဏီများသည်ဤအမျိုးအစားကိုကမ်းလှမ်းနေကြသည်။ တစ်စုံတစ် ဦး ၏ဘာသာရေးလိုအပ်ချက်နှင့်အညီအကောင့်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်သူအချို့သည်။ အစ္စလာမ်၏အခြေခံအကြောင်းအနည်းငယ်ရှင်းပြကြပါစို့ Forex ကုန်သွယ်။
Forex Trading ၏ဟလာလ်၏အခြေခံ
အစ္စလာမ့် Forex အကောင့်များ၏အခြေခံအုတ်မြစ်သည်အမှန်တကယ်ပင်စံ Forex အကောင့်များနှင့်အလွန်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများသည်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးဥပဒေများ၏အခြေခံများကိုပြည့်မီရန်လိုအပ်သည်ကိုဖယ်ထုတ်ပြီးဖြစ်သည်။
ထင်ကြေးပေး / လောင်းကစား - 'maisir'
အတိုးအားသွင်းခြင်းသို့မဟုတ်ငွေပေးချေခြင်း - 'riba'
အန္တရာယ်နှင့်မသေချာမရေရာမှု - gharar
လက်ကိုင် - 'ဟလာလ်ကုန်သွယ်မှု'
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ၊ အစ္စလာမ့်ပွဲစားတွေရဲ့အဓိကအချက်ကသူတို့ရဲ့ဘာသာတရားအပေါ်သစ္စာစောင့်သိလိုသူတွေကို Forex အကောင့်တွေပေးဖို့ပါ။ အနောက်နိုင်ငံများမှကုန်သွယ်မှုသည်ဤမူလေးချက်ကိုမထည့်သွင်းနိုင်ပါ။
Forex အရောင်းအဝယ် - Haram Or Halal?
ကမ္ဘာဂြိုဟ်၏ ၂၅ ရာနှုန်းခန့်သည်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏နောက်လိုက်များဖြစ်ကြောင်းစိတ်စွဲမှတ်ထားခြင်းအားဖြင့် Forex trading သည် haram လား၊
ဤလမ်းညွှန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရှိပါက Forex trading ၏ရှုထောင့်များသည်ရှရီယာဥပဒေတွင်လုံးဝလက်ခံနိုင်ဖွယ်ရှိသည် - သို့သော်အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တစ် ဦး အားအသုံးပြုရန်ကြိုးစားသောအရာများသည်ရှုပ်ထွေးနိုင်သည်။ အစဉ်အလာ Forex အကောင့်။
နေ့ချင်းညချင်းနှင့်လဲလှယ်ရေးအခကြေးငွေများကဲ့သို့သင်၏ယုံကြည်မှုကိုအမြဲတမ်းလေးစားမှုမပြနိုင်သည့်အရာများရှိသည်။ ဒါကြောင့်သင်ဟာအစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားများနဲ့သာကုန်သွယ်တာ ၁၀၀% ပိုကောင်းတယ်။ ဤနည်းအားဖြင့် Haram စတော့ရှယ်ယာများသို့မဟုတ်ငွေချေးစာချုပ်များတွင်ပါ ၀ င်ခြင်း၏အန္တရာယ်များမရှိပါ။
အငွေ့ကိုရှင်းပစ်ရန်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးဥပဒေ၏အဓိကစည်းမျဉ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်အနည်းငယ်ကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားပါသည်။
Maisir (ထင်ကြေး / လောင်းကစားခြင်း)
Bai bithaman ajil (ရက်ရွှေ့ဆိုင်းငွေပေးချေမှုနှင့်အတူရောင်းချ)
Bai Al Inah (ရောင်းချခြင်းနှင့်ပြန်လည် ၀ ယ်ယူခြင်း)
Bai muajjjal (ချေးငွေရောင်းချခြင်း)
မူဘဟားမား (ကုန်ကျစရိတ် - ငွေကြေးထောက်ပံ့မှု)
Bai salam (ကြိုတင်ငွေပေးချေမှုအပြည့်)
လူသိများသည်မှာလောင်းကစားခြင်းကိုအစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုနောက်လိုက်များအတွက်တားမြစ်ထားသည်။ သို့သော် Forex အရောင်းအ ၀ ယ်သည်အခွင့်အလမ်းတစ်ခုလား။
ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုများများစွာရှိခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ သင်သည်ငွေကြေးများကို ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းဖြစ်သည်။ အဓိကရည်ရွယ်ချက်မှာ Forex ဈေးကွက်တွင်ဈေးနှုန်းအတက်အကျကြောင့်အမြတ်ရရန်ဖြစ်သည်။
Forex ကုန်သွယ်ရေးအတွက်ကုန်သည်များသည်နည်းပညာဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ စျေးနှုန်းဇယားများနှင့်သမိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုလေ့လာရန်လိုအပ်သည်ကိုယခုထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည်။
တ ဦး တည်းကဤ Forex ကုန်သွယ်ရေးအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဂိမ်းပေမယ့်ဘာမှဖြစ်တယ်, ထို့ကြောင့်လောင်းကစားမဟုတ်ဆိုလိုသည်ကြောင်းငြင်းနိုင် Forex အရောင်းအ ၀ ယ်တွင်အောင်မြင်ရန်ကျွမ်းကျင်မှုနှင့်သုတေသနအချို့လိုအပ်သည်။ ထို့ကြောင့် Haram ဟု သတ်မှတ်၍ မရပါ။
Riba အကျိုးစီးပွားများအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အာရဖြစ်ပါတယ်။ Riba သည်အစ္စလာမ်သာသနာ၏နောက်လိုက်ကိုငွေလက်ခံရန်သို့မဟုတ်ချေးရန်ခွင့်မပြုသောကြောင့် Haram ဖြစ်သည်။ အစ္စလာမ့်ဘဏ်လုပ်ငန်းနှင့်စပ်လျဉ်း။ မည်သည့်ငွေစာရင်းတွင်ဖြစ်စေ၊ ငွေစာရင်းဖြစ်စေ၊ စာရင်းဖွင့်လျှင်ဖြစ်စေစိတ်ဝင်စားမှုလုံးဝမရှိပေ။
ရိုင်ဘားဥပဒေကိုကျော်လွှားရန်လူအများက 'Bai' al-Inah ကိုအသုံးပြုသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ 'sale and repurchase' ဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာအစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုရှိသူများအားချေးငှားရန်ခွင့်ပြုသည့်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးအလေ့အကျင့်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ပိုင်ဆိုင်မှုကိုငွေဖြင့်တိုက်ရိုက်ပေးမည့်အစားချေးသူသည်သင့်အား (သတ်မှတ်ထားသောကုန်ကျစရိတ်ဖြင့်) သင့်အားအကြွေးပေးသည်။
ဆိုလိုသည်မှာသင့်အားအကြွေးပေးသူသည်ဆိုလိုသည် ကိုပိုင်ဆိုင် သင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ငွေနဲ့မင်းလိုအပ်တဲ့ငွေကိုမင်းရပြီ
ဤနည်းစနစ်နှင့် ပတ်သက်၍ မကြာခဏသဘောထားကွဲလွဲမှုများရှိတတ်သည်။ များသောအားဖြင့်အဓိကငွေကြေးကဏ္ Finance နှစ်ခုဖြစ်သော MENA (အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့်မြောက်အာဖရိက) နှင့်အင်ဒိုနီးရှား / မလေးရှားတို့အကြားဖြစ်သည်။
ပုံမှန်အားဖြင့်သင်သည် Forex ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်အကောင့်ဖွင့်သောအခါကုန်သွယ်ရေးအစည်းအဝေးပြီးဆုံးပြီးနောက်သင်အနေအထားကိုကိုင်ထားပါကပွဲစားသည်လဲလှယ်ရေးကော်မရှင် (နေ့ချင်းငွေကြေး) ကိုယူလိမ့်မည်။
ပွဲစားသည်အခြေခံအားဖြင့်သင့်အားသြဇာပုံစံဖြင့်သွယ်ဝိုက်ချေးငွေတစ်ခုပေးနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဒါကအမြတ်အစွန်းရတယ်။ ဒီကိစ္စမှာစိတ်ဝင်စားမှုအပိုင်းအခြားတစ်ခုအနေနဲ့ပါ ၀ င်တဲ့အတွက် Haram လို့သတ်မှတ်တယ်။
အဓိကခြားနားချက်မှာ - အစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများသည်လဲလှယ်ရေးအတိုးနှုန်းကိုပယ်ဖျက်ပေးသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာအစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးဥပဒေအရယုံကြည်သူနောက်လိုက်များသည်အကျိုးအမြတ်အတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံရန်အတွက်အတိုးမဲ့ငွေချေးယူနိုင်သည်။
အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများသည် ၄ ​​င်းတို့ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်ငွေရှာရန်လိုအပ်နေသေးသော်လည်း၊ ၎င်းတို့သည်ကုန်ကျစရိတ်များကိုကုန်ကျစရိတ်များသို့တိုးမြှင့်ခြင်းအားဖြင့်မကြာခဏပြုလုပ်လေ့ရှိသည်။ ပြန့်ပွား။
Gharar (ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွင်အန္တရာယ် / မရေရာမှု၏တရား ၀ င်မှု)
Gharar အကြောင်းပြောရရင် - ကုရ်အာန်က“ မင်းရဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုအနတ္တတွေအတွက်မစားနဲ့” ဟုဆိုသည်။ Gharar ကို“ သင်နှင့်အတူမရှိသောအရာကိုမရောင်းနှင့်” ဟုဖော်ပြထားသည့် 'hadith' စာအုပ်တွင်လည်းဖော်ပြထားသည်။ မက်ဆေ့ခ်ျရှင်းပါတယ်
ဤအစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးဥပဒေအရအလွန်အကျွံမသေချာမရေရာမှုများ (သို့) အန္တရာယ်ရှိသည့်မည်သည့်ကုန်သွယ်မှုကိုမဆိုရှရီယာဥပဒေအရတင်းကြပ်စွာတားမြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်တိုတောင်းသောအရောင်းအ ၀ ယ်၊ အနကျအဓိပ်ပါယျကန်ထရိုက်များနှင့်အနာဂတ်အားလုံးသည်ဟားမတ်စ်များဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားများမှတစ်ဆင့်အရောင်းအ ၀ ယ်သည်ကွဲပြားခြားနားသောငါးအိုးတစ်လုံးဖြစ်သည်။ အရေးကြီးသည်မှာသင်၏စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်စိုးရိမ်စရာမလိုပါ၊ သင်၏အကောင့်အား၎င်းတို့ကိုလေးစားရန်အတွက်အဆင်ပြေအောင်ပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်တွင်မူကုန်သွယ်မှုကိုခွင့်ပြုထားသော်လည်း၎င်းကိုလက်ချင်းချိတ်။ ပြုလုပ်နိုင်မှသာ နှစ်များကုန်လွန်သွားသောအခါ၎င်းသည်မျက်နှာချင်းဆိုင်။ ဆိုလိုခြင်းဖြစ်သည်။ ၏သင်တန်းယနေ့ခေတ်ကုန်သွယ် interaction ကအများစုအွန်လိုင်းအာကာသအတွင်းထွက်သယ်ဆောင်နေကြသည်။
ပညာရှင်အချို့ကကုန်သွယ်မှုသည်ပါတီနှစ်ခု (သင်နှင့်ပွဲစား) ကြားတွင်ရှိနေဆဲဖြစ်သောကြောင့်ကုန်သွယ်မှုသည်ဟလာလ်ဖြစ်သင့်ကြောင်းထောက်ပြသည်။ သို့တိုင်ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုတူညီသောကုန်သွယ်ရေးအစည်းအဝေးတွင်ပြီးဆုံးရမည်။
Forex နှင့်ပတ်သက်လျှင်အမိန့်များသည်များသောအားဖြင့်ချက်ချင်းပင်ချက်ချင်းပင်လိုက်နာဆောင်ရွက်ရလေ့ရှိပြီး၎င်းသည်အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများအတွက်ကောင်းမွန်သောအရာဖြစ်ပြီးအစ္စလာမ်ဥပဒေများအပေါ်တည်မြဲသည်။
တိုတောင်းသောကာလနှင့်တိုတောင်းမှုမှာအစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများသည်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးနှင့်ရှရီယာဥပဒေ၏အခြေခံအားလုံးကိုလေးစားလိုက်နာရန်ဖြစ်သည်။ Forex trading halal အနေဖြင့်သင်သည်သင်၏ဘာသာရေးကျင့် ၀ တ်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ပြီးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာအခွင့်အလမ်းများလည်းပါ ၀ င်နိုင်သည်။
အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများ: ကော်မရှင်
ထုံးတမ်းစဉ်လာအရောင်းအ ၀ ယ်အကောင့်များနှင့်ဆန့်ကျင်လျက်အစ္စလာမ့် Forex အကောင့်များသည်လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်အတိုးလုံးဝမပါရှိပါ။ ၎င်းသည်ဟလာလ်အဖြစ်သတ်မှတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြခဲ့သည့်အတိုင်းတစ်စုံတစ်ယောက်သည်အခကြေးငွေယူပြီးတစ်ညတည်းတွင်သူတို့၏ရပ်တည်ချက်ကိုဖွင့်လိုက်သောအခါ၊
ထပ်ခါတလဲလဲပြောရရင်အစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားအကောင့်တစ်ခုမှာစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူး၊ Forex အကျိုးဆောင်သည်အမြတ်အချို့ရရန်အတွက်သင်သည်အခြားအခကြေးငွေများကိုပေးရသည်။
အထက်ပါများအားလုံးကို Forex trading တွင်ဟလာလ်ဟုသတ်မှတ်သည်။ ထိုသို့ပြောကြားခြင်းအားဖြင့်အထက်ပါအခကြေးငွေများမှာပြန့်ပွားမှုတွင်ပါ ၀ င်နိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်၊ ယုံကြည်ရသောအစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားကိုအသုံးပြုသည့်အခါသင်ပေးရမည့်တစ်ခုတည်းသော 'အခကြေးငွေ' သည်သင်ရွေးချယ်ထားသည့် Forex pair ၏ဝယ်နှင့်ရောင်းဈေးတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။
Islam Forex Trading: မည်သို့စတင်ရမည်နည်း
ယခုအချိန်တွင်သင်အရောင်းအဝယ်ဖြစ်နေစဉ်၌ပင်သင်၏အစ္စလာမ်သာသနာအပေါ်သစ္စာစောင့်သိနိုင်သည်ကိုသင်သတိပြုမိသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ငွေကြေး ၀ ယ်ခြင်းနှင့်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုတွေ့ကြုံရမည့်အဓိကကုန်သွယ်မှုသုံးမျိုးကိုလျင်မြန်စွာဖြတ်သန်းသွားလိမ့်မည်။
သငျသညျရောက်နေတယ်ဆိုရင် တစ်ရက်ကုန်သွယ်, သင်စျေးကွက်မပိတ်ခင်သင့်ရဲ့ကုန်သွယ်အနေအထားကိုပိတ်ဖို့ရှိသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်ကုန်သွယ်မှုနေ့မကုန်မှီ ထို့ကြောင့်အမည်, နေ့ကုန်သွယ်တစ် ဦး အနည်းကိန်းနေ့၌ထွက်သယ်ဆောင်သည်။
ဆိုလိုသည်မှာရှရီယာဥပဒေကိုဆက်လက်ထားရှိခြင်းအားဖြင့်ညအချိန်တွင်အခကြေးငွေမလိုပါ (လဲလှယ်ရေးကော်မရှင်) ။ သာမာန်တစ်ခုထက်ပိုသောအစ္စလာမ်ပွဲစားများအကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကုန်သွယ်ရေးကိုပိတ်ပြီးနေ့ချင်းညချင်းကောက်ခံရန်မလိုပါ။
ရိုးရှင်းစွာထားပါ ဉီးခေါင်းရေ အားလုံးစက္ကန့်သို့မဟုတ်မိနစ်ခန့်သာအချိန်အပိုင်းအခြားအတွင်းပိတ်လိမ့်မည်သည့်မျိုးစုံအသေးစားရာထူးဖွင့်လှစ်ရန်လိုအပ်သည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ကုန်သွယ်မှုသည်ဤမျှလျင်မြန်သောနှုန်းဖြင့်ကုန်ဆုံးသွားသောကြောင့်ဖြစ်သည် - သင်စိတ် ၀ င်စားမည်ကိုစိုးရိမ်စရာမလိုပါ။
တကယ်လို့သင်လိုချင်တယ်ဆိုရင် scalping နည်းဗျူဟာကိုသုံးတဲ့အခါ standard forex account တစ်ခုကိုအသုံးပြုပြီးသီအိုရီအရသင်အရောင်းအ ၀ ယ်လုပ်နိုင်တယ်။ သို့သော်၊ အကယ်၍ သင်၏ရာထူးကိုကြာမြင့်စွာထားရှိလိုပါကစိတ် ၀ င်စားမှုကိုရှောင်ရှားရန်သင့်အတွက်တစ်ခုတည်းသောရွေးချယ်စရာမှာအစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားတစ် ဦး နှင့်ကပ်ရပ်တည်ရန်ဖြစ်သည်။
တစ် ဦး အသုံးချဖို့တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်း လွှဲကုန်သွယ် မဟာဗျူဟာသည်သင်၏အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားမှတစ်ဆင့်ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ရာထူးများကိုရက်များသို့မဟုတ်မကြာခဏရက်သတ္တပတ်များစွာဖွင့်ထားရန်မဟာဗျူဟာကိုအသုံးပြုသည်။ အရေးအကြီးဆုံးကတော့သင်အတိုးနှုန်းကိုရှောင်ရှားရန် swap-free အကောင့်ကိုအသုံးပြုရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဥပမာအားဖြင့်သင်သည်စံသတ်မှတ်ထားသောအကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခဲ့ပါကသင်သည်မည်သည့်ဘဏ္profitာရေးအမြတ်ကိုမဆိုစွန့်လွှတ်ရမည်။ အစ္စလာမ်ဘာသာ / လဲလှယ်ရေးအစီအစဉ်မရှိသောအကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏နေရာကိုအမှားအယွင်းဖြင့်ညတွင်းချင်းဖွင့်ထားခြင်းမှဖယ်ရှားပစ်လိုက်သည်။
အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားကိုဘယ်လိုရှာရမလဲ
မြင်ကွင်းတွင်ထောင်နှင့်ချီသော Forex ပွဲစားများရှိနေသော်လည်း၎င်းတို့အားလုံးသည်အစ္စလာမ်ဘာသာ၏နောက်လိုက်များအတွက်မသင့်တော်ပါ။ ကောင်းမွန်သောပွဲစားကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုရှာဖွေရန်အကောင်းဆုံးသောအချိန်များတွင်အလုံအလောက်ခဲယဉ်းနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်တိကျသောနှင့်အတိအကျနယ်ပယ်အကောင့်တစ်ခုလိုအပ်ပါကတည်နေရာတစ်ခုရှာဖွေခြင်းသည် ပို၍ ပင်ခက်ခဲနိုင်သည်။
သင်အကောင်းဆုံးအစ္စလာမ့်ပွဲစားကိုရှာဖွေသောအခါသင်ထည့်သွင်းစဉ်းစားသင့်သည့်အရာများစာရင်းကိုကျွန်ုပ်တို့အတူတကွစုစည်းထားရှိပါသည် သငျသညျ။ သင်ထပ်မံလှုံ့ဆော်မှုနှင့်အတူလုပ်နိုင်လျှင်, ငါတို့သည်ဤစာမျက်နှာကိုထပ်မံ 2022 ၏အကောင်းဆုံးအစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများစာရင်းပြုစုကြပြီ။
ဒီဟာကအတော်အတန်သိသာထင်ရှားပေမဲ့လည်းရေဒါအောက်မှာပွဲစားဘယ်နှစ်ယောက်ပျံသန်းတာကိုသင်အံ့သြမိမှာပါ။ ထိုကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းများသည်စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့်မကိုက်ညီဘဲအမှန်တကယ်စောင့်ကြည့်ခြင်းမပြုဘဲကုန်သည်များအားအရစ်ကျ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည်တရားဝင်စည်းမျဉ်းဥပဒေအဖွဲ့မှလိုင်စင်မရှိသောသင်အားအစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားကိုသင့်အားအကြံပေးမည်မဟုတ်ပါ။ ဒုတိယအချက်မှာပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာဖွေသောအခါသင်၏ကိုယ်ပိုင်သုတေသနပြုလုပ်ရန်လည်းအလွန်အရေးကြီးသည်။
သင့်စာရင်းရှိ ကနဦးအချက်မှာ ပလက်ဖောင်းသည် တရားဝင်လိုင်စင်ကိုပြသကြောင်း သေချာစေရန်ဖြစ်သင့်သည်။ ဥပမာအားဖြင့် သင်သည် UK တွင်ရှိနေပါက၊ FCA (Financial Conduct Authority)။
သင်မသေချာပါက ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင် FCA လိုင်စင်နံပါတ်ကိုဖော်ပြထားသည်ဆိုပါစို့။ တရားဝင် FCA ပလက်ဖောင်းကိုသင်အမြဲသွားနိုင်ပြီး၎င်းကို back up လုပ်ရန်ရိုးရှင်းသောကုမ္ပဏီရှာဖွေမှုတစ်ခုကိုပြုလုပ်နိုင်သည်။
FCA တွင်ဘဏ္crimeာရေးရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်ဒေဝါလီခံရလျှင်သင်၏ငွေကိုပွဲစားကုမ္ပဏီသို့သီးခြားအကောင့်တစ်ခုတွင်ထားရှိရန်သေချာသည့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများရှိသည်။ ဤကဲ့သို့သော အခြားယုံကြည်ရသော စည်းမျဉ်းအဖွဲ့များနှင့်လည်း အလားတူကိစ္စမျိုးဖြစ်သည်။ ASIC (သြစတြေးလျ), CYSEC (ဆိုက်ပရပ်စ်) နှင့် စရဖ (စင်ကာပူ) တို့ ဖြစ်သည်။
သငျသညျအဘယျသို့သိုက်နှင့်ငွေထုတ်ရန်ရွေးချယ်စရာအစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားကိုရှာဖွေသည့်အခါသင့်အတွက်အခြားဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။ များစွာသောများသောအားဖြင့် Forex ပွဲစားများသည်သင်၏ပုံမှန်ဘဏ်မှ (ငွေလွှဲလွှဲပြောင်းခြင်းဟုခေါ်သော) ဘဏ်မှတဆင့်ငွေလွှဲပြောင်းခြင်းကိုသင့်အားခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ထို့ကြောင့်၊ ခရက်ဒစ်/ဒက်ဘစ်ကတ်များနှင့် အီး-ပိုက်ဆံအိတ်များကဲ့သို့ ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို လက်ခံသည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခုကို ရွေးချယ်ရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ PayPal က နှင့် Neteller - ဤအပ်ငွေများသည် ချက်ချင်းဖြစ်သောကြောင့်။
ငွေထုတ်ယူခြင်းသည်လုပ်ငန်းစဉ်အတွက် ၂ ရက်ခန့်ကြာနိုင်ပါသည်။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း KYC (သင်၏ဝယ်သူသိသူ) စစ်ဆေးမှုများနှင့်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းသည်သင်၏ငွေပေးချေမှုရွေးချယ်မှုနည်းလမ်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
သင်၏ပွဲစားပလက်ဖောင်းတွင်စဉ်းစားရန်အရေးကြီးသည့်အခကြေးငွေမှာပြန့်ပွားခြင်းဖြစ်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအရာသည်ဘာလဲဆိုတာသေချာမသိပါကသင်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေသော forex pair ၏ ၀ ယ်ဈေးနှင့်ရောင်းဈေးတို့၏ကွာခြားချက်ဖြစ်သည်။ ဒီပျံ့နှံ့အမြဲ '' တိုင်းတာသည်pipsသင်၏အကျိုးအမြတ်ကိုများစွာထိခိုက်နိုင်သည်။
ဥပမာ GBP / USD အတွက်ပြန့်ပွားမှုသည်3pips ဖြစ်သည်။ ချိုးဖျက်နိုင်ဖို့အတွက်အနည်းဆုံး pips ၃ ခုလုပ်ဖို့လိုလိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ပြောခဲ့သည့်အတိုင်း သင်သည် သင်၏အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားမှတစ်ဆင့် GBP/USD အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေပါသည်။
၀ ယ်ယူသည့်စျေးနှုန်းမှာ ၁.၃၁၀၀ ဖြစ်သည်0.
ရောင်းရန်ဈေးသည် ၁.၃၁၀၄ ဖြစ်သည်3.
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း နောက်ဆုံးဂဏန်းသည် Forex တွဲစျေးနှုန်းရွှေ့မည့် အသေးငယ်ဆုံးယူနစ်ကို ပြသသည်။
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, GBP / အမေရိကန်ဒေါ်လာ ပျံ့နှံ့မှုသည်3pip ဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည်ငွေကြေးတစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုကိုသာအာရုံစိုက်လိုပါကသင်ရွေးချယ်ရန် Forex အတွဲများစွာလိုအပ်သည်ဟုမထင်ပေ။ ဤနည်းသည်သင်၏သုတေသနအချိန်ကိုအတွဲများနည်းနိုင်သမျှမြှင့်တင်နိုင်သည့်အတွက်၎င်းသည် forex နေရာ၌စမ်းသပ်ပြီးနည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
တစ်ခါတစ်ရံတွင်“ ကုန်သွယ်မှုအားလုံး၏ဂျက်နှင့်အဘယ်သူမျှမပိုင်သောအရှင်” ဖြစ်ခြင်းထက်တစ်စုံတစ်ရာကိုအမှန်တကယ်ကောင်းကောင်းလုပ်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ သို့သော်သင်အချိန်ရလာနိုင်သည် do သင်၏အစုစုကိုပိုမိုလိုချင်သည်။ သို့သော်ထိုအချိန်ရောက်သောအခါ FX အတွဲများ၏အမှိုက်ပုံကိုရယူရန်ပိုကောင်းသည်။
အကောင်းဆုံးကတော့၊ သင်သည်အရွယ်မရောက်သေးသူများ၊ အထူးပြုများနှင့် 'ထူးခြားသောအရာများ' ကိုကမ်းလှမ်းသောအစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများကိုရှာဖွေသင့်သည်။ သင်သည်ဤအချက်အလက်အားလုံးကိုပွဲစား ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ရှာတွေ့နိုင်ပြီးသင်စာရင်းသွင်းခြင်းမပြုမီဤစာရင်းရှိမက်ထရစ်အားလုံးကိုစစ်ဆေးသင့်သည်။
သင်အစ္စလာမ့် Forex အကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်ရန်ရှာဖွေနေသည့်အခါထွက်ကြည့်ဖို့နောက်ထပ်အရာကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာပစ္စည်းများရရှိနိုင်ပါသည်အရာဖြစ်တယ်။
ဘာကိုကြည့်ရမလဲဆိုတာကိုအကြံဥာဏ်ပေးဖို့ကျနော်တို့ forex ကုန်သည်တွေအသုံးပြုတဲ့အသုံးဝင်ဆုံးနည်းပညာညွှန်းကိန်းအချို့ကိုစာရင်းပြုစုထားတယ်။
Commodity Channel Index (CCI) ။
Parabolic SAR ။
Forex Trading သည်မလွယ်ကူပါ။ သငျသညျအပြည့်အဝအလိုအလျောက် system ကိုအသုံးပြုနေတယ်မဟုတ်လျှင်ကြောင့်သုတေသန, ဇယားဖတ်နေနှင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာသတင်းများနှင့်အတူတက်စောင့်ရှောက်လိုအပ်သည်။ ဤသည်ကိုကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများသို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုလှပစေသည်။
အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများအားလုံးသည်ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်ကွဲပြားခြားနားသောပမာဏနှင့်အမျိုးမျိုးသောညွှန်းကိန်းများနှင့်ကိရိယာများကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ ညွှန်းကိန်းများ၊ ဇယားများနှင့်ကိရိယာများကို MetaTrader4 မှတဆင့်လည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်၊ ၎င်းသည်ကုန်သွယ်ရေးပလက်ဖောင်းဖြစ်သောအစ္စလာမ့်ကုန်သွယ်ရေးပွဲစားများကမကြာခဏထောက်ပံ့သည်။
ယနေ့ Forex ကုန်သည်များအသုံးပြုသောလူကြိုက်အများဆုံးကုန်သွယ်ရေးကိရိယာများမှာအောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။
Bloomberg နှင့် Reuters ကဲ့သို့သော ငွေကြေးဆိုင်ရာ သတင်းများ။
ကောင်းမွန်သောဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုသည်အရေးကြီးသည်။ ဖောက်သည်အထောက်အကူပြုအဖွဲ့၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအချို့သောထိုးထွင်းသိမြင်မှုရရှိရန်နည်းလမ်းကောင်းတစ်ခုသည်ဖောက်သည်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းကိုဖတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ဝန်ဆောင်မှုမကောင်းဘူးဆိုရင်လူတွေကဒီအကြောင်းပြောလိမ့်မယ်။
၂၄/၇ ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူများကိုကြည့်ပါ။ ပြီးနောက်, Forex 24/7 စျေးကွက်ဖြစ်ပါတယ်။ Live chat သည်ကုန်သည်များအတွက်ချက်ချင်းဆိုသလိုလူကြိုက်အများဆုံး option ဖြစ်သည်။ တနည်းအားဖြင့်အီးမေးလ်လိပ်စာတစ်ခုနှင့်အချို့သောဖုန်းနံပါတ်များကိုတွေ့မြင်ရန်မျှော်လင့်နိုင်သည်။
အစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားနှင့်ကျွန်ုပ်မည်သို့ဆက်သွယ်ရမည်နည်း။
ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများနှင့်ပတ်သက်ပြီးသိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုဖုံးကွယ်ထားပြီး၎င်းတို့သည်ရွေးချယ်ရန်ရွေးချယ်သည့်အခါမက်ထရစ်မည်သည်အရေးကြီးသည်။ သင်ကိုယ်တိုင်သင့်တော်သောပွဲစားတစ် ဦး ကိုရှာရန်မရှိသေးပါကသင်စဉ်းစားရန်ဤစာမျက်နှာတွင်အကောင်းဆုံးစာရင်းအချို့ကိုကျွန်ုပ်တို့စာရင်းပြုစုထားသည်။
အကယ်၍ သင်သည်စတင်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါက၊ ကျွန်ုပ်တို့မည်သို့မှတ်ပုံတင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ တစ်ဆင့်ပြီးတစ်ဆင့်အတူတကွစီစဉ်ထားပြီးဖြစ်သည်။
အဆင့် ၁ - အစ္စလာမ့်အကောင့်တခုဖွင့်ပါ
သင်ပထမ ဦး ဆုံးလုပ်ရမှာကသင်စာရင်းသွင်းရန်သင်ရွေးချယ်သောပွဲစားပလက်ဖောင်းကိုသွားပါ။ ထို site သည်သင်၏နာမည်အပြည့်အစုံ၊ လိပ်စာ၊ အီးမေးလ်နှင့်ထူးခြားသောစကားဝှက်တို့ကိုတောင်းလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်သင်သွားလေရာနေရာနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။
ထို့နောက်သင်၏လစာနှင့်အလုပ်အကိုင်အခြေအနေစသည့်သင်၏ငွေကြေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးခွန်းအနည်းငယ်ကိုဖြေဆိုရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ပွဲစားများကသင်၏ဘဏ္standingာရေးအခြေအနေနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ၎င်းတို့သည်သင့်လျော်သောကုန်ပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းရန်ဖြစ်သည်။
လှမ်း2- ကုန်သွယ်ရေးသမိုင်းကိုရိုက်ထည့်ပါ
အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ကုန်သွယ်မှုသမိုင်းနှင့်ပတ်သက်။ အမျိုးမျိုးသောမေးခွန်းများကိုမေးပါလိမ့်မည်ဖြစ်ကြသည်။ Forex သည်စိတ်ဓာတ်ကျစရာမဟုတ်ပါ၊ ထို့ကြောင့်ဤအချက်အလက်များသည်ပွဲစားများကိုသင်၏အတွေ့အကြုံ၊ အတိတ်ကသင်နှင့်သက်ဆိုင်သောကုန်သွယ်မှုနှင့်မည်သည့်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအပေါ်အာရုံစိုက်မည်ကိုနားလည်စေရန်ကူညီပေးပါလိမ့်မည်။
အဆင့် ၃ - သင်၏ဖောက်သည်အားသိရှိပါ
အစောပိုင်းကကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည့် KYC ကြောင့်သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းအတည်ပြုပြီးမှသာသင်၏အကောင့်ထဲသို့ရန်ပုံငွေများကိုသွင်းနိုင်လိမ့်မည်။ သင်၏နိုင်ငံကူးလက်မှတ်သို့မဟုတ်ယာဉ်မောင်းလိုင်စင်မိတ္တူတစ်စောင်ပေးပို့သောအခါပွဲစားများကယင်းကိုများသောအားဖြင့်ရှင်းလင်းလေ့ရှိသည်။
အဆင့် ၄ - သင်၏အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားစာရင်းကိုငွေသွင်းပါ
သင်၏ KYC စာရွက်စာတမ်းများကိုတင်ပြပြီးပါကသင်သည် ဆက်၍ ငွေသွင်းနိုင်သည်။ ငွေပေးချေမှုနည်းစနစ်များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကွဲပြားသည်နှင့်အမျှသင်ရရှိနိုင်သောအရာများကိုကြည့်ရှုရန်ဆိုက်ကိုအမြဲတမ်းစစ်ဆေးပါ။
အဆင့် ၅ - Forex ကုန်သွယ်ရန်စတင်ပါ
အခုသင်ဟာအဆင့် ၁ မှ ၄ ကိုသင်လေ့လာပြီးပြီ၊ သင်ဟာသင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုအတည်ပြုပြီးသင်၏အကောင့်ကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ခဲ့တယ် - သင်သည် Forex အရောင်းအ ၀ ယ်စတင်နိုင်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် Forex ကုန်သွယ်ရေးတွင်အစပြုသူတစ် ဦး ဦး ဖြစ်လျှင်သင်သည် demo account တစ်ခုဖြင့်စတင်ခြင်းသို့မဟုတ်အစ္စလာမ်ကို သုံး၍ အလွန်သေးငယ်သောတိုးတက်မှုများဖြင့်အရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နိုင်သည်။ မိုက်ခရိုအကောင့်။ မင်းခြေထောက်တွေကို forex နေရာမှာရှာနေတုန်းမှာပဲ။
2022 ၏အကောင်းဆုံးအစ္စလာမ့် Forex ပွဲစား
AvaTrade - Sharia နှင့်ကိုက်ညီသော MT4/5 ရောင်းဝယ်ရေး
AvaTrade သည်ကျွန်ုပ်တို့စာရင်းတွင်နာမည်ရသည့်အခြားပွဲစားတစ် ဦး ဖြစ်ပြီး ၀ န်ဆောင်မှုခံယူသူတစ် ဦး ချင်းနှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန်၎င်း၏အစ္စလာမ့် Forex အကောင့်များကိုအပြည့်အဝလိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေသည်။ အစ္စလာမ့်အကောင့်ပိုင်ရှင်တစ်ယောက်အနေနှင့်သင်သည်ထပ်မံလျှော့ချခ (တစ်ညတည်းငွေ) သို့မဟုတ်နေ့စဉ်လဲလှယ်မှုနှုန်းကိုမျှော်လင့်နိုင်သည်။ Forex အရောင်းအဝယ်လုပ်တဲ့အခါမှာမင်းက admin ရဲ့အခကြေးငွေတွေကျသင့်မှာပါ။ ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးဥပဒေများအတိုင်းဆက်လက်တည်ရှိနေသေးသည်ဟုဆိုလိုသည်။
ဤအရစ်ကျပလက်ဖောင်းသည် MetaTrader4 နှင့် Metatrader5 ကိုအထောက်အပံ့ပေးသောကြောင့်ကုန်စည်များ (၎င်းတို့သည်ဟလာလ်နေသမျှကာလပတ်လုံး)၊ CFDs နှင့်ငွေကြေးစွမ်းအားများကိုပွင့်လင်းမြင်သာမှုအပြည့်ဖြင့်ကုန်သွယ်နိုင်သည်။
ပလက်ဖောင်းသည်လျှို့ဝှက်ကော်မရှင်ကြေးသို့မဟုတ်သင်မသိသောပြန့်ပွားမှုစွဲချက်များရှိမည်မဟုတ်ကြောင်းဂုဏ်ယူစွာဖော်ပြသည်။ အစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုရှိသူများသည်အစ္စလာမ့်ဟလာလ်ငွေနှင့်ရွှေအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုလည်းရယူနိုင်သည်။ ဤအစ္စလာမ့်အကောင့်တွင် Crypto အရောင်းအ ၀ ယ်ကိုခွင့်မပြုပါ။ ထို့ကြောင့် အကယ်၍ သင် cryptocurrencies ရောင်းလိုပါကသင်သည်ပုံမှန်အကောင့်တစ်ခုကိုအသုံးပြုရမည်။
Forex၊ TRY၊ RUB၊ ZAR နှင့် MXN အတွဲများအားလုံးကို အစ္စလာမ့်အကောင့်များမှ ဖယ်ထုတ်ထားသည်။ ကျန်အရာအားလုံးသည် ရောင်းဝယ်နိုင်သော အတိုး/အခကြေးငွေ ကင်းစင်သော်လည်း ပျံ့နှံ့မှု တိုးလာရန် သင်မျှော်လင့်ထားသင့်သည် - နောက်ဆုံးတွင်၊ အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများသည် ငွေရှာရန် လိုအပ်ဆဲဖြစ်သည်။
ဤအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီသည်အစ္စလာမ့်ဘဏ္financeာရေးစည်းမျဉ်းများအားလုံးကိုအပြည့်အ ၀ လေးစားပြီးအရောင်းအ ၀ ယ်များကိုချက်ချင်းပြုလုပ်သည်။ Islam forex ကုန်သည်များသည် android, iOS နှင့် WebTrader ကဲ့သို့သောပလက်ဖောင်းအားလုံးကိုအခမဲ့အကန့်အသတ်မရှိအသုံးပြုခွင့်ရှိသည်။
ဤလမ်းညွှန်တွင်အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားများနှင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရေးကြိုးပမ်းမှုများအတွက်သင့်တော်သောနည်းလမ်းတစ်ခုကိုရှာဖွေသည့်အခါထွက်ပေါ်လာသောအဓိကမက်ထရစ်များအကြောင်းသိထားသင့်သည့်အရာအားလုံးကိုကျွန်ုပ်တို့လေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သိထားသည့်အတိုင်းပွဲစားပလက်ဖောင်းအားလုံးသည်အစ္စလာမ့်အကောင့်များအားကြော်ငြာများမလုပ်သင့်ကြောင်းသတိရရန်အရေးကြီးသည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်၎င်းတို့သည်တစ်ခါတစ်ရံတွင် 'swap-free' သို့မဟုတ် 'halal' အကောင့်များအဖြစ်အသုံးပြုသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ အတိုချုပ်ပြောရရင်အစ္စလာမ်ဘဏ္financeာရေးဥပဒေများအရအခကြေးငွေအားလုံးကိုလျှော့ချလိုက်တာပဲ။
ကျွန်ုပ်တို့ဖုံးလွှမ်းထားသည့်အတိုင်းအပြည့်အ ၀ ထိန်းညှိထားသည့်Ислам Forex ပွဲစားများကိုသာအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်သင်၏ကုန်သွယ်ရန်ပုံငွေသည်အခြားစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်သက်ဆိုင်သောဘေးကင်းလုံခြုံရေးပိုက်ကွန်များအကြားပွဲစားများနှင့်အလိုအလျောက်သီးခြားစီရှိနေသည်ကိုသင်သိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှအကြံပြုသောပွဲစားများအားလုံးသည်သင်၏လုံခြုံရေးအတွက်အပြည့်အ ၀ စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်ထားသည်။
အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားကဘာလဲ?
အစ္စလာမ့် Forex ပွဲစားဆိုသည်မှာကုန်သည်များအနေဖြင့်အတိုးနှုန်းကိုတားမြစ်သည့်၎င်းတို့၏အစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုအပေါ်တည်မြဲနေစေရန်ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်လဲလှယ်ရောင်းဝယ်ရေးပွဲစားများကိုဖလှယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားနှင့်ငွေစာရင်းကိုဘယ်လိုဖွင့်လို့ရမလဲ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရလျှင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော Forex ပွဲစားတစ် ဦး ကိုတွေ့ပြီဆိုလျှင်သင်သည်ဖောက်သည်များ၏ ၀ န်ဆောင်မှုများကိုသာဆက်သွယ်ပြီးသင့်လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီမည့် standard account ကိုပြုပြင်ရန်သူတို့ကိုတောင်းဆိုနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Forex အကောင့်အသစ်သို့ငွေသွင်းရန်မည်သို့ပြုလုပ်ရမည်နည်း။
သင်သည်သင်၏အစ္စလာမ့် Forex အကောင့်သို့အလွယ်တကူငွေသွင်းနိုင်သည်။ ပလက်ဖောင်းအများစုတွင်၎င်းသည် ၀ င်ရန်နှင့်ငွေသွင်းရန်ငွေပေးချေမှုနည်းလမ်းကိုရွေးချယ်ခြင်းကိစ္စသာဖြစ်သည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့်အစ္စလာမ့် Forex အကောင့်များမှာဒီအခကြေးငွေကိုလျှော့ချလိုက်ပါတယ်။
အကယ်၍ အစ္စလာမ်မစ် Forex ပွဲစားများသည်အတိုးမတောင်းလျှင်၎င်းတို့မည်သို့ငွေရှာကြသနည်း။
ပွဲစားအများစုသည်ပြန့်ပွားခြင်းမှတစ်ဆင့်ငွေရှာကြသည်။ ၎င်းသည်ပိုင်ဆိုင်မှု၏ရောင်း ၀ ယ်မှုနှင့်ကွာခြားမှုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်သည်အစ္စလာမ်အကောင့်ဖြင့်မည်သည့် FX အတွဲများရောင်းဝယ်နိုင်ပါသနည်း။
ဖြစ်ရပ်အများစုတွင်အစ္စလာမ့်ငွေစာရင်းသည်အစ္စလာမ့်ယုံကြည်မှုနောက်လိုက်များအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ငွေကြေးအတွဲအားလုံးကိုရှရီယာဥပဒေအရရောင်းဝယ်နိုင်သည်။ သို့သော်မတူညီသောပွဲစားများတွင်မတူညီသောစည်းမျဉ်းများရှိသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအချို့အတွဲများသည်ကန့်သတ်ခြင်းခံရနိုင်သည်။
အစ္စလာမ့်အကောင့်များကို တစ်ခါတစ်ရံတွင် swap-free အကောင့်များအဖြစ် ရည်ညွှန်းသည်။ အတိုချုပ်အားဖြင့်၊ ၎င်းသည် သင့်အား အတိုးအခကြေးငွေ မပေးရဘဲ နေ့ချင်းညချင်း ရာထူးများကို ဆက်လက်ဖွင့်ထားနိုင်စေပါသည်။